Ingabe usebenzisa wahlala nav sibe sibi amakhono ethu engqondweni yethu? - Ukuqeqeshwa kwengqondo
Izinhlelo zokusebenza namakhadi
Izinkulumo kanye nohlu lwamagama we-Neuropsychological
Imihlahlandlela yokwelapha yokukhuluma
Imisebenzi Yesikhulu kanye ne-DSA
Ngabe ukusebenzisa satanav kulimaza amakhono ethu okuqonda?
Ulapha: Ikhaya » Izihloko » Ngabe ukusebenzisa satanav kulimaza amakhono ethu okuqonda?
Bangaki walabo abafunda lesi sihloko ukuthi yini itilosi isiphuphutheki? Cishe konke kusuka lapho, kusukela lapho abaqalisi bezimoto zokuqala benziwe batholakale kuze kube manje, noma ngubani ukwazile ukuzibonela ukuthi leli thuluzi likuvumela ukwenze, futhi ngenxa yokubakhona kwabo kuma-smartphones (iGoogle Amamephu, ngokwesibonelo),
Ukube sasikhona inkomfa wambuza bangaki abake esetshenziswa itilosi satellite ukuhambisa angene noma aphume edolobheni yini, cishe ukubona izandla zawo wonke umuntu wakhulela.
Futhi uma sabuza bangaki basebenzisa imvamisa leli thuluzi, futhi kuleli cala izandla eziphakanyisiwe zizoba ziningi, mhlawumbe ezabantu abaningi ababekhona egumbini.
Umbono osabalele, hhayi phakathi kochwepheshe kuphela, ukuthi ukusetshenziswa kwe-satellite navigator "ukuvilapha" ubuchopho. Kodwa ingabe kunjalo ngempela?
UDahmani noBohbot bazama liqinisekise Ucwaningo futhi, ngokukhethekile, bazama ukuqonda uma ukusetshenziswa kwe-sat nav kukhulisa amakhono akho okubonisa ukuma.
Ukuze siqonde ukuthi ucwaningo Nokho, embonweni.
Lapho sizinakekela futhi sihamba endaweni entsha ngokujwayelekile sithembela ezinhlotsheni ezimbili zamasu:
Isikhala isu ngekhanda. Kuphathelene nokufundwa kwamaphuzu wezethenjwa nezikhundla zawo, ngakho-ke kunomthelela ekwakhiweni kwemephu ebonakalayo yemvelo. Lolu hlobo amakhono lihlobene eduze hippocampus, esifundeni ubuchopho ekusebenzeni bahilelekile inkumbulo episodic.
Umfutho impendulo isu. Kumayelana ukufunda othize motor impendulo ukulandelanisa kusukela isikhundla othize (isibonelo "jikela ngakwesokudla, khona-ke uye ngqo futhi ekugcineni ijikele ngesencele"). Leli khono kuhlobene eduze nucleus caudate, endaweni ubuchopho ezihleli yokufunda zenqubo (isibonelo, ngebhayisikili).
Ungase futhi ube nentshisekelo ku: Ngabe isuphamakethe ingafinyeleleka kuwo wonke umuntu?
Uhlobo lwesibili lwecebo luholela ekuziphatheni okuqinile kodwa luzosivumela ukuthi sihambe ezindaweni ezaziwayo sengathi sikwi-autopilot.
Manje ake siqhubekele ocwaningweni ...
Dahmani futhi Bohbot kulolu cwaningo sikhuluma aqoqene ulwazi oluningi okuyizinto ikakhulukazi okulandelayo:
idatha kusuka imibuzo kuqhathaniswa nenani amahora ukusetshenziswa itilosi satellite, bezibona kuye ngokusetshenziswa kwayo kanye nombono kokuba nomuzwa orientation.
Ukuhlolwa okwenziwa ngekhompyutha ukuhlola amakhono okuhlola isifundo, Izindlela ukufunda uhlobo ukuma indlela esetshenziswa.
Zonke lezi ukuhlolwa, izikali nohlu lwemibuzo abangu iqondiswa kabili, omunye engu-3 ngaphandle, ukuba babone izinguquko ngokuhamba kwesikhathi.
Asihambe manje ukubona imiphumela:
Abantu ababethi basebenzise i-sat nav ngaphezulu futhi bekuyilabo ababesezivivinyweni zekhompyutheni zokuma kokunye okwenza basebenzise amasu okusebenzisa umhlaba. Lesi sibalo kwaqinisekiswa futhi ngokuqhathanisa ukwehla izikolo embhalweni esebenza nge-computer (phakathi survey ezimbili emva kweminyaka 3) nenani ukusetshenziswa itilosi (njalo phezu 3 iminyaka). Ngamanye amazwi, abantu abangaphezu wayesebenzise itilosi phakathi neminyaka 3 kusengaphambili ucwaningo, kulapho zabo amakhono kwesibuko ukuhlolwa ngemishini yama-computer sawohloka.
Lapho ukusetshenziswa kwe-satellite navigator kukhuphuka, ukusetshenziswa kwecebo lokuphendula okushukumisayo lenyuka (Ngokuphikisana nokusetshenziswa kwecebo lokuncipha kwendawo). Lokhu kungenxa yokuthi i-GPS navigation yingenxa efana nokusetshenziswa isu umfutho impendulo noma, okungenani, ke enza izinto izinhlelo ubuchopho ngokwabo.
The more esetshenziswa itilosi satellite, wena kancane bakwazi ukudala amamephu yobuchopho. Lokhu kusikisela ukuthi ukusetshenziswa GPS incipha ikhono ukwakha imifanekiso yezimbali ezungezile.
Ungase futhi ube nentshisekelo ku: Ibhethri elide lokuhlolwa nezikolo eziphansi (kubantu abavamile)
Labo wasebenzisa GPS abaningi babe ngaphansi bakwazi ukuqonda amaphuzu inkomba ukuthola indlela yabo
Njengoba inani amahora ukusetshenziswa satellite Itilosi yanda, ikhono lokufunda kwemizila emisha kwehle.
Sekukonke, imiphumela yalolu cwaningo basikisela ukuthi ukusetshenziswa njalo itilosi satellite onakalisa ikhono lethu ukufunda izindlela ezintsha futhi Orient thina.
Ungakwazi ukuqeqesha inkumbulo yakho?
Ngabe isuphamakethe ingafinyeleleka kuwo wonke umuntu?
UDahmani, L., & Bohbot, VD (2020). ukusetshenziswa komkhuba GPS omubi imithelela inkumbulo ngekwendzawo phakathi navigation self-eqondiswa. Imibiko yesayensi, 10(1), i-1-14.
isithuthukisi Ukufunda: okuyinto amathuluzi ...
Amandla wezibalo kanye nomuzwa wenombolo. Yibuphi ubuhlobo?
I-Multiple sclerosis: ukusilela kwengqondo namakhono okushayela
Isifo se-Alzheimer's kanye namakhono okushayela
I-google maps, Itilosi satellite, ukuma kwendawo, umuzwa wokuqondisa
Ngabe ukusebenzisa satanav kulimaza amakhono ethu okuqonda?2020-05-012020-05-12http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttp://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/utilizzare-il-navigatore-satellitare-peggiora-le-nostre-capacit-cognitive.jpg200px200px
Usebenzelana ne-neuropsychology ekukhuleni, kobudala obudala nobudala obuthile. Njengamanje usebenza ngokubambisana kumaphrojekthi amaningana maqondana nezici zokucabanga kwezifo ezithile ze-neurodegenerative.
Imininingwane Wonke Amalungelo Agodliwe © 2017
kunesidingo Kwenziwa njalo
MMSPE. Ithuluzi elisha lokuhlonza kwengqondo lezinganeImibhalo, Ukuhlolwa
Bazuza malini abafundi basekolishi abane-ADHD ngokubukeza izifundo zabo?I-ADHD, izindatshana